Koox ka dhisan dalka Spain oo Arsenal ka qaadanaysa xiddig muhiim ah ka hor kulanka wayn ee Tottenham Hotspur – Gool FM
(London) 28 Agoosto 2019. Real Sociedad ayaa lagu soo waramayaa inay dooneyso inay dhameystirto heshiiska daafaca Arsenal ee Nacho Monreal sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan ka hor kulanka ay naadigan ka ciyarayso horyaalka La Liga habeenka Jimcaha.
Kooxda reer Basque ayaa u soo bandhigtay 33-sano jirkaan labo sano oo heshiis si ay dib ugu soo celiyaan waddankiisa hooyo ee Spain, iyada oo qiyaar u haysata sanad kale oo saddexaad inay ku hordhiso heshiiskiisa haddii uu qaab ciyareed cajiib ah soo badhigo kal ciyaareedkan 2019-2020.
Sociedad ayaa haatan la rumeysan yahay inay isku dayayaan inay heshiiska horay u riixaan si daafaca dambeedka bidix uu tababar ula qaato asaxaabtiisa cusub isbuucaan, isla markaana uu kaga soo muuqdo kulanka Basque Derby ee ay la ciyaarayaan kooxda Athletic Bilbao fiidnimada Jimcaha.
Kooxda uu hoggaamiyo Imanol Alguacil ayaa garaacday Mallorca Axaddii si ay u xaqiijiyaan helidda afar dhibcood labadii kulan ee ugu horreysay horyaalka Spain kaddib markii ay barbaro la galeen kooxda Valencia.
Si kastaba ha ahaatee, Daily Express ayaa ku warramaysa in inkastoo tababaraha Arsenal ee Unai Emery uu diyaar u yahay inuu iska fasaxo Monreal, oo 250 kulan u ciyaaray kooxda tan iyo markii uu kaga soo biiray Malaga bishii Janaayo 2013-kii, waxaa laga yaabaa inuusan ku deg degin heshiiskan ka hor dhammaadka isbuucaan.
Gunners ayaa wajaheysa kooxda quwadda badan ee Tottenham Hotspur kulanka weyn ee Waqooyiga London maalinta Axadda, Macallin Emery ayaa la rumeysan yahay inuu doonayo inuu ceshto ciyaaryahankan.
Yeelkeede, Arsenal diyaar ayey u tahay in ay iska iibiyaan waayeelka ay ku soo xamaasheen sanadihii ugu dambeyay, balse waxa ay ka fiirsanayaan inay iibin karaan ka hor kulankooda ay wajahayaan kooxda ay ka wada dhisan yihiin ee Tottenham Hotspur.